खुसिको खबर : घरमा छोरी हुने परिवारलाई नेपाल सरकारले निशुल्क दिने भयो अब यस्तो सुविधा ! – Paluwa Khabar
माघ ३०, २०७७ शुक्रबार 127
खुसिको खबर :
घरमा छोरी हुने परिवारलाई नेपाल सरकारले निशुल्क दिने भयो अब यस्तो सुविधा ! काठमाडौ ।
प्रदेश नं २ सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत बीमा गराएका २७ हजार छोरीको घरमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने तयारी थालिएको छ । छोरी शिक्षा बीमा गराएका २६ हजार ९५६ छोरीको घरमा निःशुल्क इन्टरनेट जडानको तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
गत माघ २ गतेखि प्रदेश नं २ का १३६ वटै पालिकामा छोरी शिक्षा बीमाको शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । संयोजक यादवले अहिले छोरी बीमा गराएका घरमा इन्टरनेट जडान गर्न मोबाइल नम्बर सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो
। *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***..
Prevसंसद पुनस्थापना नहुने संंकेत, जताततै सेटिङ्ग, संविधानको घाँटी रेटियो –प्रचण्ड
Nextमाझीबस्ती : यथार्थ र भ्रम
भारतमा स’ ङ्क्रमण बढ्न थालेपछि नेपालमा यस्तो नयाँ निर्देशन जा
बैठक सकिएपछि किन पुगे प्रधानमन्त्री ओली संसदमा, सभामुख संग भए फायर (यस्तो छ कारण) ?